२४ जना थारू सांसद निर्वाचित
काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा थारू समुदायबाट जनसङ्ख्याको अनुपातमै प्रतिनिधिसभाबाट उम्मेदवार निर्वाचित भए पनि प्रदेशसभामा भने त्यस्तो हुन सकेन । प्रतिनिधिसभातर्फ १० जना र प्रदेशसभातर्फ १४ जना थारू समुदायका उम्मेदवारले बाजी मारे ।
कुल जनसङ्ख्याको करिब ७ प्रतिशत रहेका थारू समुदायका लागि यो सङ्ख्या केही मात्र कमी हो । प्रतिनिधिसभाको कुल १६५ को १० जना भनेको ६ प्रतिशत हो । यद्यपि उम्मेदवारी भने धेरै जनाको परेको थियो । जनगणना २०६८ अनुसार थारूको जनसङ्ख्या १७ लाख ३७ हजार ४७० छ ।
निर्वाचित १० जना थारूमा तीन जना नेकपा (माओवादी केन्द्र), तीन जना नेपाली काँग्रेस, दुई जना नेकपा (एमाले) र दुई जना राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबाट रहेका छन् । निर्वाचित थारूमा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी थारू (मोरङ ४), सन्तकुमार थारू (बर्दिया २), गौरीशङ्कर चौधरी (कैलाली ३) हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै काँग्रेसबाट तेजुलाल चौधरी (सप्तरी ४), उमाकान्त चौधरी (बारा १), विजयकुमार गच्छदार
(सुनसरी ३) हुनुहुन्छ । एमालेबाट नारदमुनी रानाथारू (कैलाली ५) र मेटमणि चौधरी (दाङ १) हुनुहुन्छ भने राजपाबाट रेशमलाल चौधरी (कैलाली १) र चन्द्रकान्त चौधरी (सप्तरी ३) रहनुभएको छ ।
सोही अनुसार प्रदेशसभातर्फ १४ जना थारूले जित निकालेका छन् । यो कुल ३३० मा ४.२४ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेशसभातर्फ एमालेबाट सात जना, माओवादी केन्द्रबाट चार जना, कांँग्रेसबाट एक जना र राजपाबाट दुई जना छन् ।
थारू उम्मेदवारहरूले राजनीतिक विरासत कायम गरेका चर्चित उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै जित निकाल्न सफल भएका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पत्नी डा. आरजु राणा देउवालाई पराजित गर्दै कैलाली ५ मा नारदमुनी रानाथारूले जित सुनिश्चित गर्नुभयो । त्यस्तै अमनलाल मोदी थारू पूर्ववनमन्त्री महेश आचार्यलाई पराजित गरी निर्वाचित हुनुभयो ।
प्रदेशसभातर्फ निर्वाचित थारूमा एमालेबाट वैजनाथ चौधरी (नवलपरासी २ (क)), त्रिलोकी चौधरी (बारा १ (क)), तुलसीप्रसाद चौधरी (रूपन्देही ३ (ख)), कविराम थारू (बर्दिया १ (क)), लगनलाल चौधरी (सिराहा १ (क)), नेपालु चौधरी (कैलाली ५ (क) र कुलवीर चौधरी (कञ्चनपुर १ (ख) हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट इन्द्रजीत थारू (दाङ १ (क), रामलाल महतो थारू (चित्तवन ३ (क), निपेश चौधरी (बर्दिया २ (क)) र वीरमान चौधरी (कैलाली ३ (क) हुनुुहुन्छ । सोही अनुसार काँग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी (दाङ ३, (क)बाट निर्वाचित हुनुभयो । त्यस्तै राजपाबाट शङ्करलाल चौधरी (पर्सा ४ (क) र कृष्णबहादुर चौधरी (कैलाली १ (क) रहनुभएको छ ।
टीकापुर घटनामा आरोपित रेशमलाल चौधरी कैलाली १ बाट जित सुनिश्चित गर्दा वाम गठबन्धन र काँंग्रेस दललाई आश्चर्यचकित नै पार्नुभयो । वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार गरिमा शाह र काँग्रेसकी उम्मेदवार ईश्वरी न्यौपानेलाई पराजित गर्दै चौधरी भारी मतले निर्वाचित हुनुभयो । सो जितलाई धेरैले अप्रत्यासित जित भन्नुभयो ।
चर्चित मत पाएर पराजित
थारू समुदायका चर्चित उम्मेदवारमध्ये केहीले सम्मानजनक मतका साथ पराजय भोग्नुप¥यो । काँग्रेसबाट उम्मेदवारी दिनुभएका डा. गोपाल दहित (बर्दिया २)मा माओवादीका सन्तकुमार थारूबाट पराजित हुनुभयो । ३६ हजार ७३५ मत ल्याएर पनि उहाँ पराजित हुनुभयो । सन्तकुमार थारूले ५० हजार ५५५ मत ल्याएर दहितलाई पराजित गर्नुभयो ।
त्यस्तै सुनसरी ३ बाट कँंग्रेसका विजयकुमार गच्छदारबाट पराजित हुनुभएका एमालेकी नेत्री भगवती चौधरीको मत पनि सम्मानजनक छ । ३८ हजार ६५१ मतका साथ उहाँले पराजय बेहोर्नुप¥यो । गच्छदारले ३८ हजा ९७२ मत ल्याउँदा भगवती ३२१ मतले पछाडि पर्नुभयो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा गच्छदारले ३६५ मतले चौधरीलाई पराजित गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै उदयपुर १ बाट काँग्रेसका नारायण खड्कासँग पराजित हुनुभएकी एमालेकी अर्का नेत्री मञ्जुकुमारी चौधरीको मत पनि सम्मानजनक छ । उहाँ ३२ हजार ५९४ मत ल्याएर पराजित हुनुभयो । खड्काले ३३ हजार १४२ मत प्राप्त गर्दा चौधरी ५४८ मतले पछाडि पर्नुभयो ।
त्यस्तै अन्य चर्चित थारू उम्मेदवारमा काँंग्रेसका रामजनम चौधरी (कैलाली ३)बाट पराजित हुनुभयो । सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी (पर्सा ३)बाट पराजित हुनुभयो । त्यस्त, जनकराज चौधरी कैलाली १ (क)बाट पराजित हुनुभयो भने लक्ष्मण थारू (कैलाली ५)बाट पराजित हुनुभयो ।